Umhla My Pet » 7 Izinto Ofanele Uzazi Phambi ndithandana Foodie
7 Izinto Ofanele Uzazi Phambi ndithandana Foodie
ukubuyekezwa: Jul. 01 2020 | 2 min ukufunda
Nangona mna ngokwam ndingekho ifeni enkulu yokutya, abahlobo bam kunye nemihla ziye Foodies self-luxelwa. Eli binzana a nje akuthethi ukuthatha imifanekiso yokutya ngeposi ku eendaba zentlalo. Foodies ulikhoboka ukuba ukutya, kwaye kukwangokusebenzisa ubuhlobo bam Foodies apho ndiye ndafunda nje zingema uya kuba nokutya.
likhoboka kwabo ukutya ngaphaya nantoni ninomfuziselo. Ukutya ophambili yokuqala neyokugqibela ngomhla. kwaye, akukho umgca itsalelwa ukufumana “ogqibeleleyo” into yokutya. Zilungiselele ukuba bahambe imigama emide ukuze nje amaqunube ekunene.
Foodies iingcali xa kufikwa pairings ukutya. Ukuba bathe bacebisa ukutya intlanzi kunye nerayisi okanye ukuxuba sauce ezimbini kunye, kuhamba ngayo. Amathuba okuba icebo labo liya uvule amehlo enu ukuba ukutya bunencasa.
Foodies nabo badla ukungcamla ezithandwa yi ngokucothayo elinukayo ukutya kwabo. Nangona le meko kugeza, okunene kuya kukunceda ukuba uqonde ukutya nto leyo sinokuzuza ulwalamano lwakho.
Nokuba nto Yelp okanye Google, nangoko emva uzama yokutyela entsha okanye esityeni, tyazana yakho iya kuba uyafudumala malunga ukubhala ngokutsha njenge tyazana, baziva luxanduva ukwazisa ezinye Foodies ezifumaneka ukufunyanwa yabo entsha.
Cwangcisa ixesha lakho ngeenxa ukutya
Imihla nezokuhamba uya enye ixhomekeke ukutya. Amathuba abo baye benza uluhlu emele kufuneka-zama izitya zokutyela. Ekuhambeni, jonga uluhlu kwaye chola abambalwa kwezo zokutyela ukuba ufuna ukuzama.
Foodies baba ngabahlobo ezingcono abancedisi kwiindawo zokutyela abazithandayo. Kuphela ngaba bobabini bafumane basondelelane phezu ukutya kodwa ukwazi umncedisi kunokubangela izaphulelo kunye / okanye izitya emfihlekweni. ngokunjalo, ukuba iseva othandwayo kuthetha uza kuphela restyu xa mncedisi usebenza.
Oku akulahlekisi nje tyazana yakho ungathanda komulela kodwa baya becala kusenokwenzeka ubugcisa kakhulu ekhitshini. Nangona ufumana ukuzama iiresiphi emnandi, Foodies ziya kuba “ezilahlekileyo” ekhitshini iiyure. Xa ngaba ukufumana kwi mood zokupheka, Ndicebisa abazenzayo ekhitshini ukuba bachithe ixesha kunye nabo.
ukuba indawo kwivenkile yokutya Soloko
Akwazi ezinokufuna into. Foodies asazi kuphela apho evenkileni esikufutshane yokutya kodwa kwakhona baya kwazi iiyure. Zilungiselele ukuba ngomzuzu wokugqibela yokutya ivenkile runs.
Ndithandana tyazana kusoloko ebazi. Xa lako likhoboka yabo crazy-ezifanayo, uya ngokuqinisekileyo akasoze alambe uthando kwakhona.